Magaalo in Bari, Soomaaliya * PuntlandTemplate:SHORTDESC:Magaalo in Bari, Soomaaliya * Puntland
Qandala waa magalo xeebeed oo ku taalo gobolka Bari ee woqooyiga Soomaaliya.Magaaladaan waxee 75km u jirtaa magaalada Boosaaso oo kaga beegan dhinaca bari. Qandala (oo sidoo kale loo yaqaanno Candala, Andala, Bender Chor, Bandar Kor, Bender Kor ama Taba Tege ) ayaa ah dekedda hore ee waqooyiga bari ee Soomaaliya. Guudmarka Maqaalka ugu muhiimsan: Taariikhda badda ee Soomaaliya
Qandala waxay ku fadhidaa hareeraha wadi, oo ah dekedda dabiiciga ah ee dabiiciga ah ee Gacanka Cadmeed  Waxay qiyaastii 75 kiiloomitir u jirta bari ee Boosaaso, 549 kiiloomitir (341 mi) koonfurta Aden, iyo 475 kiiloomitir (295 mi) galbeedka Socotra.
Magaaladu waxay ku taallaa gobolka maamulka Puntland. Waa caasimadda Degmada Qandala.
Qaar ka mid ah gaboobay, Qandala waxay ahayd ganacsi firfircoon ganacsatada ka socotay gudaha Geeska Afrika, kuwaas oo u soo qaadey alaab sida fooxa, xanjo iyo alwaaxa aromatic iyo ka soo baxa dekedda. Magaciisa Gacanka Hodonka ("Gulf of Prosperity") waa mid ka soo jeeda xilligan. 
Qandala waxay leedahay dad ku dhow qiyaastii 19,300 oo qof. 
Qandala waxay leedahay tiro hay'ado tacliin ah. Sida laga soo xigtay Wasaaradda Waxbarashada ee Puntland, waxaa jira 15 dugsi hoose oo ku yaal Degmada Qandala. Kuwaas waxaa ka mid ah Xamure, Dhadar, Turmasale iyo Gurur. 
Qandala waxay leedahay deked yar yar. 
Gaadiidka hawada ee magaalada ayaa waxaa bixiya Garoonka Candala. 
Waxaana Ku Dhashay Mid Ka Mid Ah Madaxda Xusbiga Puntland Revelactoin Part Waa Nin Lagu Magcaabo Eng Hakan Hakiim Oo Hada Lagu Daray Liiska Raga Haddii Puntland Ay Yimaad Xabsiyada Galaaya
Qandala waxay ku talaa dhulka ugu khayraadka badan somalia khasatan xagga maydiga,beeyada,xabagta.
qandala waxaa hoos yimaada tulooyin badan waxaana ka mid ah Karin,Bashaashin,Unuun,Gurur, dhamaan tulooyinkaan waxay ku yihiin xoolodhaqasho iyo weliba sarcashada geedka dhulkaas ilahay ku beeray ee beeyada iyo maydiga
Wikimedia Commons waxee heysaa war la xiriiro Qandala.
Qandalla waa Magaalo xeebeed aad u qurux badan oo ka mid ah degmooyinka gobolka bari
waxayna leedahay taariikh aad u dheer oo soo jireen ah sidoo kale waxay leedahay taalooyin leh taariikh dheer kuwaas oo ay ku duugan yihiin dad wadanka taariikh wanaagsan uga tagay .
waxaana ka mid ah dadkaasi cali faahiye geedi callan gube ku magac dheeraa oo ahaa ninkii dabka suray callankii gumaystaha ee talyaaniga .
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Qandala&oldid=212635"
Magaalooyinka Gobolka Bari
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 22 Juun 2021, marka ee eheed 08:56.